Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 20/11/2020)
Airline oche bụ notoriously obere on legroom, na ị na-agaghị ekwe ka iji kọmputa ngwaọrụ n'oge takeoff na ọdịda. Nke a pụtara maka mkpumkpu flights, ị na-anọzi gị obere oche n'ihi na ọtụtụ ndị na ụgbọ elu na-enweghị ihe ndọpụ uche awa site smartphones na technology, this is really different from a train ride.
Cars mgbe-enye a nta ọzọ ohere, ma ndị ịnyịnya nwere ike ịbụ bumpy na ụfọdụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ụgbọ ala ọrịa – karịsịa na a ogologo njem mgbe ị nwere ike chọrọ ịgụ ma ọ bụ egwu egwuregwu. ụgbọ okporo ígwè, n'akụkụ aka nke ọzọ, na-enye ala oche na a ezigbo ride – Iweputa site ogologo takeoff na ọdịda ugboro, ọzọ ahụmahụ dị iche from a train ride.
Train njem na Italy bụ karịsịa mara mma so make sure you travel along the Cinque Terra between Levanto and La Spezia, ma ọ bụ a njem ala n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri si Rimini ka Catania.
Ụgbọ oloko emit nnọọ ole na ole carbon anwuru than planes or cars. Dị ka otu nnyocha, ugbo ala emit okpukpu abụọ na ego nke CO2 than trains do.
Mgbe odomo anwụ kwa njem-mile, efe efe bụ ukwuu odi mfe karịa ịnya ụgbọ. Ebe a bụ ihe mere: e nwere ihe na-erughị ohere nke mmadụ njehie, ọ na-esikwara anyị ike ịghọ onye na-anya ụgbọelu karịa inweta onye nyere ya akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala. Buru n'uche ihe n'ụzọ na ọnọdụ na ike ọgwụgwụ na ogologo draịva, ọ dị mfe ịhụ ihe mere ị na-ahọrọ a ụgbọelu bụ odi mfe karịa a ụgbọ ala.
Iberibe anya nwere ike ngwa ngwa karịa njem ụgbọ okporo ígwè, ma maka obere anya, ikuku njem anaghị zọpụta oge. First, mkpa ka ị ga-esi na ọdụ – mgbe nsogbu anya n'ebe residential ebe. Ikwesiri ịnọ ebe ọbụlagodi otu elekere tupu oge ezumike gị iji lelee ma banye nchekwa. Ọ bụrụ na ị elele ibu, ị ga-mkpa ichere ka ya na carousel. Ma nke ahụ bụ niile tupu ọ bụla ụgbọ elu na-egbu oge ma ọ bụ ije ma ọ bụ ụgbọ ala n'agbata ọdụ ọnụ na ọnụ ụzọ ámá.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)